EPA ၏အကျဉ်းမိတ်ဆက် - Nantong ပုရွက်ဆိတ် Machinery Co. , Ltd မှ
အချိန်: 2017-09-30 hits:
အဆိုပါ ယူနိုက်တက်စတိတ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအေဂျင်စီ (EPA သည် သို့မဟုတ်တခါတရံတွင် USEPA) တစ်ဦးအေဂျင်စီဖြစ်ပါသည် အဆိုပါ U.S ၏. ဖက်ဒရယ်အစိုးရ ကွန်ဂရက်ကအတည်ပြုဥပဒေများအပေါ်အခြေခံပြီးစည်းမျဉ်းများရေးသားခြင်းနှင့်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းဖြင့်လူ့ကျန်းမာရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်၏ရည်ရွယ်ချက်ဖန်တီးခဲ့သော. အဆိုပါ EPA သည်နိုင်ငံတော်သမ္မတရစ်ချတ်နစ်ဆင်တို့ကအဆိုပြုထားခဲ့သည် ဒီဇင်ဘာလအပေါ်စစ်ဆင်ရေးစတင်ခဲ့သည် 2, 1970, နစ်ဆင်ထားတဲ့အလုပ်အမှုဆောင်အလို့ငှာလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်.
အဆိုပါ EPA သည်ဝါရှင်တန်ရှိ၎င်း၏ဌာနချုပ်ရှိပါတယ်, D.C., အေဂျင်စီ၏တစ်ဦးချင်းစီ \_ 's တစ်ဆယ်ဒေသများအတွက်ဒေသဆိုင်ရာရုံးခွဲများ, နှင့် 27 ဓါတ်ခွဲခန်း. အဆိုပါအေဂျင်စီပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ကျင်းပ, သုတေသန, နှင့်ပညာရေး. ဒါဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဥပဒေများအမျိုးမျိုးအောက်မှာအမျိုးသားရေးစံချိန်စံညွှန်းများထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပြဋ္ဌာန်းများ၏တာဝန်ရှိပါတယ်, ပြည်နယ်နှင့်အတူတိုင်ပင်အတွက်, လူမျိုးစု, နှင့်ဒေသခံအစိုးရများ. ဒါဟာကိုယ်စားလှယ်တချို့ခွင့်ပြု, စောင့်ကြည့်မှု, U.S ရန်နှင့်ဘက်တော်သားတာဝန်. ပြည်နယ်များ နှင့် Native အမေရိကန်အမျိုးအနွယ်. EPA ဘက်တော်သားအင်အားကြီးဒဏ်ငွေပါဝင်သည်, ပိတ်ဆို့မှုများ, နှင့်အခြားအစီအမံ. အဆိုပါအေဂျင်စီကိုလည်းစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်ညစ်ညမ်းမှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များနှင့်စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေးအားထုတ်မှု၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံအတွက်အစိုးရအဆင့်များအားလုံးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်.
အဆိုပါအေဂျင်စီကခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ရှိပါတယ် 17,000 အချိန်ပြည့်န်ထမ်း. နှင့်စာချုပ်အခြေခံပေါ်မှာအများကြီးပိုပြီးလူတွေထိတွေဆက်ဆံမှုပြုလုပ်ပါက. ပိုများသော EPA သည်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်၏ထက်ဝက်ထက်အင်ဂျင်နီယာများဖြစ်ကြသည်, သိပ္ပံပညာရှင်များ, နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအထူးကု; အခြားအုပ်စုများဥပဒေရေးရာပါဝင်သည်, အများပြည်သူရေးရာ, ဘဏ္ဍာရေး, နှင့်သတင်းအချက်အလက်များနည်းပညာသမား.
prev: Air ကို-သန့်စင်၏အကျဉ်းမိတ်ဆက်
နောက်တစ်ခု: Rammer ၏နည်းပညာဆိုင်ရာ Core